Horudhac (Barnaamijka Maraykanka ee Qorista Qaxootiga) - CORENav
Barnaamijka Ogolaanshaha Qaxootiga ee Maraykanka
Haddaad tahay qaxooti aadna ku laaban karin wadankaagii hooyo, Waxaad xaq uyeelan kartaa inaad wadan kale uguurto si joogta ah. Tan waxaa looyaqaanaa dib udajin.
Si wadan kale laguu dajiyo, waa inaad xaq uyeelataa laguguna aqbalaa dhexda nidaamka rasmiga ah. Dhamaan wadamada uqaata qaxootiga in ay daganaansho siiyaan waxay leeyihiin nidaamyoaad ukala duwan oo ah codsiga dib udajinta.
Wadanka Maraykanka waa mid kamida wadamada adduunka aqbala dib udajinta qaxootiga. Lagasoo bilaabo 1980, Maraykanku wuxuu soo dhaweeyay malaayiin oo qaxooti ah oo aduunkoo dhan kakal yimid ayadoo loomaraayo Barnaamijka Qorista Qaxootiga ee Maraykanka, ama USRAP. Si laguugu tixgeliyo USRAP waa inay kusoo gudbisaa Wakaalada Qaxootiga UN ka ee looyaqaano UNHCR ama aad uqalanto inaad ka acodsato Adoo maraaya Mid kamida Barnaamijyada Codsiga tooska ah.
Ilaha iyo macluumaadka halkan lagu bixiyay waxay faahfaahiyaan nidaamkaa USRAP.
Isla marka aad bilowdo nidaamka USRP, waa kuwan talaabooyinka aad maraysid:
Talaabada 1: Waraysiga Baaritaaanka ka horeeeya
Talaabada 4: Jihaynta Dhaqameed:
Kiiska dib udajinta ee qofkasta oo qaxooti ah waa mid gaar ah waqtiga ay qaadanayso in lagu dhameeyo nidaamka USRAP waxay ku xirantahay macluumaadka iyo xaaladaha kiis walba.
Dib udajintu waa ikhtiyaar ufuran kaliya tiro aad ukooban oo qaxooti ah oo dhammaystirka nidaamkana waxay kaqaadanaysaa waqti iyo dadaal dhankaaga ah si lamida dhanka dawlada MAraykanka. Kahor inta aadan bilaabin nidaamka, waa inaad hubtaa inaad rabto dagitaanka Maraykanka haddii aad u qalnto. Dhamaan adeegyada nidaaminta dib udajinta waa lacag la’aan. Marna inta lagu jiro nidaamka qofna kaama codsan karo wax lacag ah adeeg kasta oo dib udajint ah oo uukusiiyo. Haddii qof uu lacag kuwaydiisto, uu kugu qasbo inaad codsi samayso, sheegto inuu awoodo inuu faragelinayo ama dedejinayo codsigaaga, ama si kasta kuugu hanjabo,, fadlan soosheeg. Waxaa lagu siin doona macluumaad sida loosoo sheego khiyaanada mrka lagaa qaadaayo waraysiga koobaad. Xarun kasta oo Taageerta Dib udajinta waxay leedahay cinwaan iimayll ugaar ah oo khiyaanada laggaga warbixiyo.